अमेरिकामा बाबुराम भट्टराईलाई कालो झण्डा, हत्याको आरोप ! [भिडियोसहित] - अमेरिकामा बाबुराम भट्टराईलाई कालो झण्डा, हत्याको आरोप ! [भिडियोसहित]
अमेरिकामा बाबुराम भट्टराईलाई कालो झण्डा, हत्याको आरोप ! [भिडियोसहित]
२०७५, ३१ भदौ, 04:55:53 AM
टेक्सास । पुर्बप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई अमेरिका टेक्सासको डालसमा कालो झण्डा देखाइएको छ । नेपाली समुदाय संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागी शनिबार डालस आइपुगेका नयां शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक तथा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. भट्टराईलाई कालो झण्डा देखाइएको हो ।
एनआरएनए टेक्सास च्याप्टर, नेपाली समाज टेक्सास लगायतको संयुक्त आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुरु हुनै लाग्दा हल भित्र पस्ने क्रममा डा. भट्टराई तथा भट्टराई पत्नी हिसिला यमीलाई कालो झण्डा देखाइएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा गोरखाबाट चुनाव जितेका डा. भट्टराईलाई जन सम्पर्क समिती पदाधिकारी तथा तरुण दल अमेरिकाका अध्यक्ष ओम भट्टराई सहितको समुहले कालो झण्डा देखाएको हो ।
माओवादी द्धन्द्धका क्रममा हजारौं निर्दोष नेपाली नागरिकको हत्या, अपहरण गरेको तथा हजारौंलाई बिस्थापित हुन बाध्य पारिंदा डा. भट्टराई पनि नाइके मध्येका एक भएकोले बिरोध श्वरुप युद्ध अपराधिलाई अमेरिकामा कालो झण्डा देखाएको तरुण दल अमेरिकाका अध्यक्ष ओम भट्टराइले बताए । यद्यपी डा. भट्टराई हाल तत्कालिन माओवादी छाडेर नयां शक्ति नेपाल पार्टीको संयोजक हुन ।
अमेरिकाको डिसीबाट नेपाली समुदाय संगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुरु गरेका भट्टराईलाई दोश्रो कार्यक्रम डालसमा कालो झण्डा देखाइएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजकमा एनआरएनए डालस च्याप्टर पनि समाबेस भएपछि एनआरएन अमेरिकाका पदाधिकारीहरु बीच नै यसबारेमा असन्तुष्टि बढेको सामाजिक संजाल मार्फत देखिएको छ ।
Former Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai faces Protestors just outside the program venue in Dallas, TEXAS
Gepostet von Nepal11 Live am Samstag, 15. September 2018